Bahrain: Kamo Ve Ny Arabon’ny Golfa? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2018 14:20 GMT
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nitafatafa tamin'ny Asharq Al-Awsat , gazetin'ny firaisambe arabo mpiseho isanandro, ny minisitry ny asa Bahraini Majid Al Alawi, ary nolazainy tao amin'ilay resadresaka fa miatrika ny ‘tsunami aziatika’ ny Golfa satria ‘kamo’ sy ‘simba’ ary miankina amin'ny mpiasa afarana avy any ivelany ireo teratany ao Golfa amin'ny fanaovana na dia ny asa tsotra aza. Nambarany fa ireo vahiny mpiasa manodidina ny 17 tapitrisa ao Golfa izay aziatika ny ankamaroany, dia ho ‘loza ratsy kokoa noho ny baomba atomika na ny fanafihan'ny israeliana’. Ahoana ny eritreritr'ireo bahraini mpitoraka bilaogy ?
“Commonwealth” an'i India ve ?
Eo am-pijerena ny fisampatsampanana ara-politika goavana momba ilay antsoina hoe ‘tsunami’ i Mahmood :
Azonareo izany. Efa ôfisialy. Isika – Arabo- dia kamo, be famàtra sady tsy mahomby. Hoy ny filazan'ny minisitry ny Asa. Io minisitra io ihany izay nanana tetika tsy nahomby tamin'ny famerana fatran'ny fidiran'ny mpiasa nifindra monina any Golfa fara-fahelany 6 taona…. ankehitriny no mampitandrina fatratra ny amin'ny ‘Tsunami aziatika’ izay hitarika fiovàna tanteraka amin'ny ara-demografia amin'ireo firenena ireo. … Miombon-kevitra aminy i Mansour Al-Jamri, ilay tonian-dahatsoratry ny Al-Wasat any Bahrain. … Manome tolokevitra i Al-Jamri fa ireo vahiny mpiasa izay mahazatra antsika ireo, sady araka ny taratasy fahazoandàlan-dry zareo, dia tsy tokony ho sokajiana ho vonjimaika noho ny faharetan-dry zareo ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misy antsika. Hamafisiny fa tena fifindràmonina goavana no eto amintsika. Ary ambarany fa mety hitaky ny zo maha-olona azy sy ny zo ara-politikany tsy ho ela izy ireo. Na tiantsika na tsy tiantsika , dia omen'ny fifanarahana iraisam-pirenena izany zo izany ry zareo. Ankoatra izay, dia efa maro amin'izy ireo no nihoatra ny fepetra takiana mba hahazoana ny zom-pirenena izay nofidiany hiasàna na dia hatramin'ny fampiasàna ny lalàm-panorenana sy ny lalàna ao an-toerana aza. […] Raha tsy misy ny fiovana ara-drafitra goavana marina sady matanjaka, angamba hivadika tsy ho voafehy intsony ny toe-draharaha ka ho voahilika tanteraka ny Golfa Arabo. Araka ny toromarik'i Al-Jamri, tsy isalasalàna ny hampiasàn'i India ny fahefàna lehibe ato amin'ny firenentsika, amin'ny alàlan'ny fanomezandàlana. Amin'ny alàlan'ireo olom-pireneny an-tapitrisa nahazo zom-pirenena, hampihatra ny fahefana ara-politika sy ara-kolontsaina tsy voafetra izy, na manohy miaina sy miasa tsotra izao ato amin'ny firenentsika tsy misy fanarahamaso ary tsy mampiasa vola amin'ny fanabeazana sy ny fanarenana ny olona. Heverin'i Al-Jamir fa tsy ho ela dia hampivoatra ny firenentsika ho isan'ny “Commonwealth an'i India” ny fiantraikan'ny politikan'i India, ho tonga hatramin'ny fitazonana toerana ambony eo amin'ny sehatra ara-panjakana sy tsy miankina, eny fa hatramin'ny fiakarana amin'ny toeran'ny minisitra eny anivon'ireo Kabinetra.
Hoy i Eyad maneho hevitra momba ilay lahatsoratra :
Ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny vahaolana dia ny fahatokiantsika ny tenantsika, tsy maintsy ekentsika ny halementsika sy ny antony ilàntsika olona maro be hiasa ho antsika … tsy ampy traikefa arak'asa eo amin'ny sehatra maro isika indrindra fa ny lafiny teknika amin'ny zavatra maro, misy fomba maro azo hamahàna io olana io ary tsy misy amin'ireny ny haingam-pihavy, mora vidy na tsotra, tsy maintsy amboarintsika indray mandeha tsy miverina ny rafi-panabeazantsika, tsy maintsy asiana ny lalàna manery ny orinasa tsirairay mba hanofana Bahraini MAHAY ary afaka hanolo ireo vahiny anatinà fotoana iray voafaritra.
Maneho hevitra i Johnster :
Raha ohatra ka “kamo” ny arabon'ny CCG ary mazoto miasa ny any amin'ny tany andalam-pandrosoana, antony iray izany hizaràna pasipaoro betsaka araka izay azo atao ka ho lasa mpiasa mazotozoto ny teratany CCG, amin'ny ankapobeny.
Avelao ny fiainana kamo
Asongadin'i Ammar, ao amin'ny lahatsoratra mitovy lohahevitra amin'io, ny fomba fiainana tsotra mahazatra ny ankamaroan'ny olona :
Na dia tsy miombon-kevitra amin'ny Minisitry ny asantsika aza aho ry Majeed Al Alawi, dia tsy maintsy miaiky fa indraindray milaza zavatra tsara betsaka izy. … Omaly ny Dr Majeed dia niresaka momba ny hakamoantsika, amin'ny maha-olona, maha-firenena, maha-faritra. … Marina izany. Manomboka zatra ny fiainana kamo isika ; mampiditra mpanampy ao an-trano isika mba hanome antsika rano iray vera satria tsy te-ho voahelingelina amin'ny fankanesana any an-dakozia isika, na mampirina ny fandrianantsika satria, asa, raharaha be ho antsika ny fanaovana izany. Manana mpiasa manatona antsika eny amin'ny fiarantsika isika eny amin'ny tranombarotra lehibe sy ny trano fisotroana kafe mba handray ny komandintsika, satria toa ezaka be ho antsika ny manokatra ny varavaran'ny fiara sy mandeha an-tongotra maka izay ilaintsika. Mampiditra olona isika mba hanao ny asa tsotra indrindra : manao dite ho sotrointsika, manasa ny fiarantsika, mahandro ny sakafontsika, mipasoka ny fitafiantsika. Olona ambony isika ka tsy misy antony hampiasantsika ny rantsan-tànantsika amin'ny fiainantsika. […] Nefa na ho ela na ho haingana, tsy maintsy ho fantatsika ny fomba fanaovan-javatra. Tsy haharita mandrakizay io fiangaly fiaina io, indray andro any tsy ho hita intsony ireo rehetra ireo, satria hanomboka hahazo hery ara-toekarena ny firenena aziatika ary hahita ireo mpiasa ireo fa tsaratsara kokoa ny miverina mody. Indray andro any, ho lasa lafo be ny fikojakojana io fiangaly fiaina io ary tsy hahefa izany ilay izaho miaingitraingitra ao anatinao. Any andro iray, rehefa hitarika firenena hafa ianao ka tsy zavatra tahaka izany no fenitra, dia ianao ihany no manao zavatra. Any andro iray rehefa tsy ho hita intsony io fiangaly fiaina miaingitraingitra io, dia ho tavela ao anaty toe-draharaha sarotra ianao, tsy mahafantatra izay atao , na izay ho fihetsika. Any andro iray.
Izao no lazain'i Evil Odd ao anatin'ny fanehoankevitra iray :
Rehefa tsy matoky ny hafa intsony ianao hanao ny asanao dia hamboariko ny valiziko ka hody aho. Mandra-paha aloha, faly aho mametraka ny lambam-baravarako, manolo ny hidin-dranon'ny trano fandroako, manadio ny fiarako, miborosy ny kiraroko, mametaka bokotra amin'ny lobako, mametraka ny karatra lahatsary amin'ny solosainako, manao dite, manadio ny trano fivoahana, mahandro, manamboatra ny fandriako ary ireo pitsopitson-javatra hafa izay hifaliako ary mampalahelo ahy raha esorina amiko. Oh, manana asa tontolo andro koa aho …
Ary hoy i Redbelt :
Aleoko mandany vola amin'ny teknolojia toy izay manararaotra manakarama isam-bolana ireo fanahy mahantra amin'ny karama vary masaka.